भारतीय मिडियामा ओलीको कडा जवाफ : आफ्नो नक्सा छाप्न भारतलाई किन सोध्नु ? ( हेर्नुस भिडियो ) |
भारतीय मिडियामा ओलीको कडा जवाफ : आफ्नो नक्सा छाप्न भारतलाई किन सोध्नु ? ( हेर्नुस भिडियो )
२०७७, २८ पुष मंगलवार १०:४६ January 12, 2021 ताजा खबरसमाचार
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई तथ्य, प्रमाण हेरेर सीमा विवाद सुल्झाउन तयार रहेको सन्देश दिनु भएको छ । सीमा विवादपछि पहिलो पटक भारतीय टेलिभिजनलाई दिनु भएको ५० मिनेट लामो अन्तर्वार्तामा उहाले सत्य र तथ्यलाई सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
भारतीय संस्थापन भनेर चिनिने जी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाले सीमा विवादलाई सम्बन्ध बिगारेको हिसाबमा जोड्नु भन्दा भएको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले सत्यलाई मान्नुपर्छ, तथ्यलाई मान्नुपर्छ । र भावनालाई सम्झनुपर्छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘आधारहिन भावनालाई होइन् । साचो, तथ्य र प्रमाणमा आधारित भावनालाई सम्झिनुपर्छ ।’
विवादित नक्सा किन छापेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले निक्कै सटिक र नाजवाफ हुनेगरी उत्तर दिनु भएको छ । ‘भारतले नक्सा छापेको छैन, भारतले आफ्नो नक्सा छापेको छ । हरेक देश आफ्नो नक्सा छाप्छन्, आफ्नो भूमिलाई समेटेर छाप्छ नि ! विवाद भयो भनेर नक्सा नै नछाप्ने त हुन्न नि’, उहाले अगाडी भन्नुभयो, ‘पाकिस्तानसँग भारतको विवाद छ तर नक्सा त छाप्छ । आफ्नो भूमि जुन हो भनेर दावी गर्दै त्यसलाई समेटेर छाप्छ । पाकिस्तान पनि आफ्नो भूमि मानेर उसले पनि नक्सा छाप्छ । जुन दिन सो विवाद टुंगोमा पुग्छ त्यो दिन एकै प्रकारको नक्सा बन्छ ।’